LEGO ကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ Marvel စတူဒီယို၏ Zombie Captain America
LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel Studios 'Zombie Captain America?
27 / 08 / 2021 27 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 622 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel ဖုတ်ကောင်, MCU, ရောဘတ် Kirkman, Sean Phillips က, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါလမ်းလျှောက်သေ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်
တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? undead ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာသည် Lego အတူခေါက်ပါ 71031 Marvel စတူဒီယို, စတုံartZombie Captain America နှင့်ပူးပေါင်းသည်။
စာရေးနေစဉ်တွင် Steve Rogers ၏ဤအသားစားသုံးသည့်ပုံစံကိုပြသနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ Marvelalternate-reality ကာတွန်းစီးရီးများ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကို MCU ဇာတ်ကောင်ရဲ့နောက်ကွယ်ကအလားအလာနောက်ခံကိုအနည်းဆုံးထိုးထွင်းဖို့ကာတွန်းစာအုပ်သမိုင်းဆယ်စုနှစ်တွေရှိတယ်။
စတင်ရန်အသိသာဆုံးနေရာဖြစ်သည် Marvel The Walking Dead ဖန်တီးသူ Robert Kirkman ရေးသားခဲ့သော (၅) ကြိမ်မြောက်အကန့်အသတ်မဲ့စီးရီးများနှင့် Sean Phillips တို့ကရေးဆွဲသည်။ သတ်မှတ်ထားသော E ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ၏အခြားဗားရှင်းတစ်ခုတွင်သတ်မှတ်ပါarth-2149 ဇာတ်လမ်းမှာပါဝင်တယ် Marvel သူရဲကောင်းများသည်၎င်းတို့အားဆာလောင်မှုကိုပေးသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းသိပါတယ်၊ စံဖုတ်ကောင်တွေ။
တကယ်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်…? Steve Rogers ရဲ့ရာထူးအဆင့်အတိုင်းဒီ minifigure ကိုနည်းပညာအရ Zombie Colonel America လို့ခေါ်သင့်တယ်။ Marvel Zombies - ဒါပေမယ့်ဒီနွေရာသီရဲ့ရောင်း ၀ ယ်ကိုဖြတ်ပြီးသူ့နာမည်ပေးထားတာက Kirkman ရဲ့ဇာတ်လမ်းကကာတွန်းပြပွဲအတွက်တိုက်ရိုက်အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းထက်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဘာတွေကွာခြားလဲ Marvel Zombie မီဒီယာအများစုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဇာတ်ကောင်များတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့သည် ဦး နှောက်သေစေသောကျေးကျွန်များမဟုတ်ကြပါ၊ ၎င်းတို့တွင်သူတို့၏ultန္ဒြေရှိသမျှရှိနေသေးသည်၊ သူတို့မြင်သမျှလူတိုင်းကိုစားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောသူရဲကောင်းများနှင့်ဗီလိန်များအကြားလိုင်းများကိုမှုန်ဝါးသွားစေနိုင်သည်၊ သို့သော်သက်ဆိုင်ရာ What If ... ? episode ကိုသေချာသိဖို့
MCU ၏မိသားစုအဆင်ပြေစေသောခံစားချက်များကြောင့်ဘာသာရေးကိုဘာသာရေးအရစွဲကပ်နေသော Kirkman ၏ရူပါရုံကိုမြင်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ Marvel Zombies များသည်နောက်ဆုံးတွင် Red America ၏ ဦး နှောက်ကိုဆွဲထုတ်သည်ကိုမြင်သည်၊ သို့သော်ဗိုင်းရပ်စ်၏ကျေးဇူးကြောင့် ဦး နှောက်သည် Black Panther သေဆုံးပြီးသားအနှစ် ၄၀ အကြာတွင်တိုက်ခိုက်ရန်ကူညီသည်ဟုဆိုသည်။ တောသား။ အရမ်းရိုင်းတာဖြစ်နိုင်တယ် Disney+.
ပူးတွဲပါ minifigure 71031 Marvel စတူဒီယို Zombie Captain America ကိုသရုပ်ဖော်ပုံအဆင့်လောက်နဲ့သရုပ်ဖော်ထားတာတောင်မှပိုဆိုးတဲ့ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းဘက်ကိုမှီခိုနေပုံရတယ်။ စုဆောင်းထားသောအသေးစားမရ။ အဲဒါကိုမင်းငါတို့ဖတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းပဲအရမ်းအားကောင်းတဲ့ line-up မှာပိုကောင်းတဲ့ minifigures တွေထဲကတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတယ် အစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ် series တစ်ခုလုံးရဲ့
သင် Zombie Cap ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလိုလျှင်၊ သင်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်သေတ္တာထဲတွင်သူ့ကိုတွေ့နိုင်ခြေအရှိဆုံးနေရာကိုရှာကြည့်ပါ 71031 Marvel စတူဒီယို ငါတို့သုံးနိုင်သည် ဖြန့်ဝေလမ်းညွှန်မရ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ငါတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်စရိုက်အချက်အလတ်တွေအတွက်ကျန်တဲ့အောက်က link တွေကိုကလစ်ပါ။
71031 Marvel စတူဒီယို ကနေ ၀ ယ်ယူရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ် LEGO.comအတွက် Lego စတိုးဆိုင်များနှင့်တတိယ -p ကိုဖြတ်ပြီးartဒေသအများစုတွင်စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ y လက်လီရောင်းချသူများ
← Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 76391 Hogwartမြောက်အမေရိက၌ s Icons Collectors 'Edition သည်နှောင့်နှေးသည်
LEGO တွင်ပိုမိုကောလာဟလအသေးစိတ်များ Ideas Home Alone အစုံ →